ATN: August 2010
၂၁ ရာစုထဲမှာ ကျနော့် ချို့တဲ့နေမှုများက အရောင်စုံ
တူးတတ် ဆွတတ်သူ ဆိုတော့ကာ
မီးခိုးရောင် အတိတ်ဆိုတာကိုပဲ အမြဲ ပြန်ဖော်နေမှ...
တွက်တတ် ချက်တတ်သူ ဆိုတော့ကာ
ငွေရောင် ကယ်လ်ကယျူလေတာ တလုံးတလေကိုတော့လည်း ၀ယ်ထားမှ...
ညည်းတတ် ဆိုတတ်သူ ဆိုတော့ကာ
အဖြူရောင် အီလက်ထရစ်ဂစ်တာ တလုံးတလေကိုလည်း အနား ထောင်ထားမှ...
ပယင်းရောင် ဂျက်ဒန်နီယဲလ်လေး တလုံး နှစ်လုံးတော့လည်း ဆောင်ထားမှ...
ကြည့်တတ် မြင်တတ်သူ ဆိုတော့ကာ
သတ္တုရောင် ချစ်သူ့မျက်နှာလေး အမျိုးစုံကိုလည်း အိုင်ဖုန်းထဲ ထည့်ထားမှ...
ရောတတ် နှောတတ်သူ ဆိုတော့ကာ
သက်တန့်ရောင် မျက်နှာ ဘုတ်အုပ်မှာလည်း ဖရဲန်းဒ်တွေ အက်ဒ်ထားမှ...
သွားတတ် လာတတ်သူ ဆိုတော့ကာ
လိမ္မော်ရောင် ဘလော့ဂ်စပေါ့ဒေါ့ကွန်းမှာ ခြေရာတွေချည့် ချန်ထားမှ...
ပွားတတ် များတတ်သူ ဆိုတော့ကာ
အစိမ်းရောင် ဂျီတော့မှာလည်း အကောင့်တခု ဖွင့်ထားမှ...
ရေးတတ် ဖွဲ့တတ်သူ ဆိုတော့ကာ
ပန်းနုရောင် ပို့စ်မော်ဒန်-အန်တိုင်း-အယ်လ်ပီ-နဲ့ ဒန်ဘလယ်ဒီ စာတွေလည်း ရေးဦးမှ...
ချစ်တတ် ခင်တတ်သူ ဆိုတော့ကာ
အပြာရောင် အီကြာကွေးလေး တချောင်းလောက်ကလည်း ရှိဦးမှ...
ပေါက်တတ် ရွဲ့တတ်သူ ဆိုတော့ကာ
အနီရောင် အူကြောင်ကျား ကဗျာတပုဒ်လောက်ကိုလည်း ရေးပစ်ဦးမှ...
at 2:10 AM6comments:
ရေး - နိုင်မြန်မာ
ဆို - ကိုင်ဇာ
ချစ်ချစ် မချစ်ချစ် အကြင်နာ အမှန်အစစ် ရင်မှာ ဒဏ်ဖြစ်စေ...
ကြားကြား မကြားကြား ကျနော်ဟာ သည်စကား အကြိမ်တရာ ထပ်ပြောနေ...
အိုး... နေနိုင်သူလေး နေနိုင်သူလေးရေ...
အိုး... နေနိုင်သူလေး နေနိုင်သူလေးရေ...
အ်ုး... နေနိုင်သူလေး နေနိုင်သူလေးရေ...
သိသိ မသိသိ သူမမြင်အောင်ကြည့် ကျနော်ဟာ အကြည့်သူခိုးလေ...
ဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် စာမှန်မှန်ရေး အကြင်နာ အဖြစ်လေးတွေ...
သူ အလေးအနက် မထားလည်း ရှိပါစေ...
ဆွေးဆွေး မဆွေးဆွေး တွေဝေမှိုင်ငေး နွေရေအိုင်လေးရေ...
ရူးရူး မရူးရူး တခါမှ မချစ်ဖူး သူဟာ အချစ်ဦးမေ...
မှတပါး အခြားလည်းမရှိ သိပါစေ...
ငှက်ကလေးကို တေးဆိုပါစေ အချစ်ရယ်...
စိတ်ညစ်စရာသတင်း၊ သေခြင်းတရား၊ မိသားစု...
ခုတလော အလုပ်ရှုပ်လွန်းသည်မို့ မည်သည့်စာကိုမျှ သူ မဖတ်ဖြစ်။ သတင်း တချို့သာ ခေါင်းစဉ်တွေ ဖတ်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် မနက် အလုပ် မသွားခင် အီးမေးလ်ဖွင့် စစ်တိုင်း သူ့ ဂူးဂဲလ်ရီဒါမှာ ဖိ(ဒ်)ယူထားသည့် သတင်းဆိုက်များမှ သတင်း ခေါင်းစဉ်များကို ကမန်းကတမ်း ဖတ်ရသည်။ သည့်နောက် အလုပ်သွား။ အလုပ်က ပြန်ရောက်သည့်အခါ နောက်တကြိမ် အီးမေးလ် ဖွင့်စစ်၊ ဒါတောင် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဂျီမေးလ်တခုကိုသာ သူ ဖွင့်ကြည့် ဖြစ်တော့သည်။ သူ့ ရာဟူးမေးလ်၊ ဟော့တ်မေးလ်-များဆိုလျှင် ဖွင့်ကို မဖွင့် ဖြစ်တော့။ ဟော့တ်မေးလ်ဆိုလျင် ပါ့စ်ဝါ့ဒ်ပင် မေ့နေလေပြီ။ ထားတော့...။
နက်ပေါ်တွင် ရှိသမျှသော ဗမာလိုတင်နေသည့် သတင်းဆိုက်များ အားလုံးနီးပါးကို သူ ဖိ(ဒ်) ယူထားသည်။ ခက်သည်က သတင်းတခု တက်လာသည်နှင့် ဆိုက် တော်တော်များက တပြိုင်နက်ထဲလို တင်လိုက်ကြသည်မို့ ဆိုက်တွေကသာ များနေပြီး သတင်းကတော့ သည်သတင်းပဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း သတင်းတွေကို ခေါင်းစဉ်သာ သူ ဖတ်နေမိခြင်း ဖြစ်သည်။ သတင်း အတော် များများကလည်း မဲပြာပုဆိုး။ ခေါင်းစဉ် ဖတ်လိုက်လျှင် သတင်း အပြည့်အစုံကို ဆက်ဖတ်စရာ မလိုတော့လောက်အောင် ပြည့်စုံလုံလောက်နေပြီ။
မည်သို့ဖြစ်စေ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ရော ဗမာပြေ(ပြည်)ကြီးနှင့်ပါ အဆက် မပြတ် အောင်တော့ သတင်းတွေကို သူ ဖတ်ရမည်။ သည်လိုနှင့် မနက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်များကို ဖတ်ကာ ညဖက်ကျမှ သူ ဖတ်လိုသော သတင်းများကို အပြည့်အစုံ ဖတ်ဖြစ်လေတော့သည်။
No news is good news. ဆိုသော စကား ရှိသည်။ မည်သည့်သတင်းမျှ သတင်းကောင်းမဟုတ်-ဟု ဘာသာပြန်ရမည်လား (သို့မဟုတ်) သတင်းမရှိခြင်းသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်-ဟု ဆိုရမည်လား...။ မည်သို့ဖြစ်စေ ခုတလော ဖတ်နေရသည်က စိတ်ညစ်ညူးစရာများချည့်သာ။ အာဖဂန်မှာ တာလီဘန်များ သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်သည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တခု၏ ဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစရာ ဖတ်ရသည်။ မကေ ပင် သည်အကြောင်းကို ပို့စ်တခု ရေးထားသေးသည်။ အလုပ်ထဲမှာ သည်အကြောင်းကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပြောဖြစ်သည့်အခါ ကဗျာဆရာ ဒီလက်မျိုးက - ကနေဒါမှာလည်း ကရင် မိသားစု တစု အသတ်ခံရတယ်-လို့ ကြားတယ် အကို - ဟု ပြောလာသည်။
အိမ်ရောက်တော့ သည်ကရင်မိသားစု သတင်းကို သည်မှာ သူ သွားတွေ့ရသည်။ သည်လိုနှင့် ဂျီတော့က ချက်တင်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားတချို့ ဟိုသည် ပြောဖြစ်ရင်း (သေခြင်းတရား)အကြောင်း သူ စဉ်းစားမိသည်မှာ ရှည်လျား ဝေးလံလွန်းလှလေတော့သည်။
ယခု သူ လက်ရှိရောက်ရှိနေထိုင်နေသည့် အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်သို့ မရောက်မီက ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ တနှစ် ကျော်ကျော်ကြာအောင် သူ နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုကာလများ အတွင်းမှာ ၉ လခန့် အလုပ်လက်မဲ့အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရဖူးသည်။ ရနိုင်သမျှသော အလုပ်များကို လိုက်ရှာရင်း Temp အလုပ်များလည်း လုပ်ခဲ့ရဖူးသည်။ စုဆောင်းထားသမျှ ငွေကြေးများ ခမ်းခြောက်သွားသည်အထိ အတိ ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရဖူးသည်။
ထိုကာလများအတွင်းမှာ တရက်သားမတော့ တီဗီသတင်းများကို ကြည့်နေရင်း မိသားစု တစုလုံး သေဆုံးသွားကြသည့် သတင်းကို တီဗီစခရင်းမှာ မြင်ရသည်။ Murder-Suside Case... ။ လူမည်း မိသားစု...တစု...။ အဖေရော အမေရော တပြိုင်နက်တည်း lay off ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်များက ၃ လစာ လုပ်ခ ကြိုပေးပြီး အလုပ်မှ ဖြုတ်လိုက်သည်။ သည် ဇနီးမောင်နှံမှာ ကလေးက ၃ ယောက်ရှိသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ အလွန်များသည့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ နောက်ထပ် သူတို့ အလုပ်ရနိုင်ဖွယ် မရှိ။ Unemployment Benefit လျှောက်သည်။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ အငြင်းပယ်ခံရသည်။ Cash Aid လျှောက်သည်။ ၃ လစာသာ ထောက်ပံ့ကြေးရသည်။ ၃ လ အကြာမှာ ထောက်ပံ့ကြေး ဖြတ်လိုက်သည်။ သည့်နောက်မှာတော့ မိသားစု တစုလုံးကို ဖခင် ဖြစ်သူက သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ပြီးနောက်... သူ့ နားထင် သူ သေနတ်နှင့်တေ့ကာ... ဘ၀အားလုံးကို အဆုံးသပ်သွားသည်။
သည်သတင်းကို ဖတ်ရချိန်... တီဗီမှာ ကြည့်ရချိန်မှာ သူ စိတ်မကောင်း...။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေချိန်...။ ဖခင်တယောက်၏ စိုးရိမ်သောကများကို သူ ကောင်းကောင်း နားလည်ပါသည်။ တိုက်ဆိုင်နေသည်က သူ့မှာကလည်း သားကလေး ၃ ယောက်။ နောက် အလုပ် လက်မဲ့ ဘ၀...။ သည်လို တူညီနေသော ဘ၀မျိုး ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ဘ၀ကို ထိုလူသည် သည်လိုမျိုး အဆုံးသပ်ရရိုးလား...။ နောက်ထပ် သူ ကြိုးစား အားထုတ် ရုန်းကန် ဆန်တက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် အင်အား မရှိတော့သည်လား...။ ဘ၀ကို ထိုသူ အရှုံးပေးသွားသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသူ့ အရှုံးပွဲများမှာ ... သူ့ဇနီးမယားနှင့် သမီးသားများ မပါဝင်သင့်ပေ...။ စဉ်းစားရင်း ဖခင်တယောက်ဖြစ်နေသောသူသည် ဖခင်တယောက် မည်သို့ ခံစားနေရမည်ကိုလည်း နားလည်ပေးနေမိပါသည်။ ငတ်နေသည်ထက် သေသည်က ကောင်းမည်လား... ထိုသူ စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားမည်...။ သေလျင်ကော...။ သူသာသေမည်လော...။ အတူတူသေကြမည်လော...။ ထိုသူ စဉ်းစားသည်ဟု သူထင်သည်...။ မိသားစုဆိုတော့ ထိုသူသည် မိသားစုနှင့် အတူတူသာ သေချင်မည်-ဟု သူ ယုံကြည်ထင်မြင်နေမိသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သို့ သူ မပြောင်းရွှေ့ခင်က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ဆယ်စုနှစ် တခုနီးပါး သူ နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူ့ သားအငယ် နှစ်ယောက်စလုံးကို ထိုပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သည် နှစ်ယောက်က Floridian များဖြစ်သည်...။ US Citizen များလည်း ဖြစ်သည်။ သား အငယ်ဆုံးလေးကို မွေးတော့ သူ ဘလော့ရေးကာစ အချိန်ဖြစ်သည်။ သားငယ်လေး မွေးချိန်မို့ သူ vacation ယူလို့ရသည်။ သားငယ်လေးကို မွေးတော့ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ဖြစ်သည်။ မွေးဖွားချိန်မှာ ၉ ပေါင်ခွဲ ရှိသော သားအငယ်ဆုံးလေးကို မဟေသီက သဘာဝအတိုင်း မမွေးနိုင်သဖြင့် C-session ပေးကာ မွေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုက်ခွဲ မမွေးခင်မှာ သူ့မှာ စာရွက်မျိုးစုံကို လက်မှတ်ထိုးရသည်။ သူလက်မှတ် မထိုးရင်ပဲ ထိုဗိုက်ကို မခွဲတော့မလိုမျိုး။ အိပ်ချင်မူးတူး မနက် ၃ နာရီကြီးမှာ လက်မှတ်ထိုးထားသော စာတွေကို သေချာ ပြန်ဖတ်မိသည့်အခါ ဗိုက်ခွဲမွေးရသဖြင့် မည်သည့်အရာမျှ အာမမခံနိုင်...။ မိခင်နှင့်ကလေး လွင့်စင်သွားသည့်တိုင် (ဆိုလိုသည်မှာ လျှောဘုရားသားပြသွားသည့်တိုင်) ၄င်းတို့ အပြစ် မဟုတ်ပါ... ဟု- ကျွန်ုပ်က သဘောတူညီနားလည်ပါသည်-ဟု ဆိုလိုလေသည်။ (တကယ်တော့ အမေရိကန် ဥပဒေများ အားလုံးလိုလိုက ငါ့ ပြသနာမရှာရင်ပြီးရော ဥပဒေများသာ ဖြစ်ပါသည်...) ထိုစဉ်က သူ့စိတ်ထဲမှာ မဟေသီသာ ဆုံးပါးသွားလျင်-ဆိုသော အတွေးက အတော့်ကို အနှောက်အယှက် ပေးလေသည်။ မဟေသီ မရှိသော ဘ၀ကို သည် ကလေး ၃ ယောက်နှင့် မည်သို့ လျှောက်လှမ်းရမည်လဲ။ သူ အတော့ကို ခေါင်းခြောက်ဖူးခဲ့လေသည်။
နေရောင်ခြည်များ ဖူးပွင့်လန်းဆန်းရာ Sunshine State ဟု ခေါ်သော ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်သည် အမိဗမာပြည်နှင့် အတော့ကို တူလေသည်။ တကယ်တော့ သူက သူ့ဘ၀ကို ဖလော်ရီဒါ ရေပြာစမ်းမှာ အခြေချဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၃ သိန်းတန် အိမ်တလုံး ၀ယ်ခဲ့ဖူးသည် (လစဉ်ပေးစနစ်နှင့်ပါ) သို့သော်လည်း ဖလော်ရီဒါသည် သူ့နေရာ မဟုတ်-ဟု ယခုတော့ သူထင်မြင်နေမိသည်။
တနေ့သားတော့ သူဝယ်ထားသည့် အိမ်ရှိရာ အနီးအနားက ဟိုက်ဝေး အိပ်က်စစ်တခုမှာ မိသားစု တစု အသတ်ခံရသည့် သတင်းကို သူတွေ့ရပါသည်။ သူ့အိမ်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသော အမှတ်-၅၃ အိပ်က်စ်စစ်နံဘေးမှာ အသတ်ခံထားရသော မိသားစု ၄ ယောက်။ ဖခင်က ဘယ်ဖက်မှာ၊ မိခင်က ၂နှစ်သားကလေးနှင့် ၄ နှစ် သမီးလေးကို ဘယ်ညာဖက်ပြီး သူ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် သေနတ်ကျည်ဆန်တွေကို ကာကွယ်ပေးထားပုံ...။ မူးယစ်ဆေးဝါး အရှုပ်အထွေးတွေထဲမှာ... ကလေးလေးလေးတွေ အသက် စတေးခံရ...။ ဘယ်လို ဘ၀တွေတဲ့လဲ... ကလေးတို့ရယ်...။ သူ့ရင်တွေ မချိပါ...။
ဖအေ လူဆိုးဖြစ်သည်နှင့် သည်ကလေး ၂ ယောက် သည်ဒဏ်ကို ခံရတော့သည်တဲ့လား...။ ကမ္ဘာကြီးကပဲ မတရားမှုတွေကို လက်ခံနေတော့သည်လား...။ ကလေးများ၏ အနာဂတ်သည် မည်သို့ စာလုံးပေါင်းမည်လဲ...။
ထိုစဉ်က သူခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာများ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတကွ ဘ၀ဆုံးခဲ့ရသော မိသားစုများမှာ ကောင်းကွက်တခုတော့ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် သေကွဲ ရှင်ကွဲ-ဆိုသော ဘ၀ကို မကြုံလိုက်ကြရ။ သေအတူ ဘ၀ကိုသာ ကြုံလိုက်ကြရသည်။
သေကွဲ... ရှင်ကွဲ... များ ကြားထဲမှာ... သေအတူ ဖြစ်ခဲ့ရသောဘ၀များအတွက်... သူ ၀မ်းမသာမိသည့်တိုင်အောင်... စိတ်ကျေနပ်မှု တစုံတရာတော့ ရခဲ့မိပါသည်...။
မဟေသီနှင့်အတူ သူ... သေချင်ပါသည်...။
လွမ်းလို့ ကျန်နေခဲ့မှာကို အားနာလွန်းလို့ပါလေ...။
စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်း တပုဒ် ရှိပါသည်။
-လူအိုက သူ့ခွေးအိုနဲ့ အတူတူ သေပါရစေလို့ ရှားရှားပါးပါး... ဆုပန်တဲ့အဖြစ်... -
မေရေ မောင်တို့ကြားမှာ ချည်ထားတဲ့ သည်ကြိုးဟာ... သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်... သံယောဇဉ်.... ရယ်ပါ...
ခုတော့လည်း သူ တစုံတခုကို ကျေနပ်နေသလိုလို ဖြစ်မိသည်...။
လူ့ဘ၀ကြီးထဲမှာ တပြိုင်နက်တည်း အတူ ထွက်ခွာခွင့်ရသွားခဲ့သော မိသားစုများအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
မိသားစုများ မည်သည့်အခါမျှ သေကွဲ ရှင်ကွဲ အကွဲများကို မကြုံကြရပါစေနှင့်...
တပည့်သားမှာလည်း... မိသားစု တစု ရှိပါသည်...။
ရှင်အတူ... သေအတူ... ဘ၀များကိုသာ... တွေ့ဆုံကြုံကြိုက်သွားခွင့်ပြုပါ ဘုရားသခင်...
at 4:02 PM 16 comments:
ဟိုး... ... ရွာလယ်လမ်းလေးရဲ့ ထိပ်မှာ...
ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ရင်း စောင့်နေရှာတယ်...
သူ့ရဲ့... မြေးသားကလေး ၃ ယောက်ကို
ဟော... ဟိုး... စပါးတောထဲမှာ...
ရင်တွေ ကွဲသွားရင်း ပြောရှာတယ်...
ဘာများ ပြန်ပြောပြနိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ... သားတို့ရယ်...
အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျော်ခဲ့ပြီ...
အဖေ့... အမေ... ရှိတယ်...
မင်းတို့... အမေ... ရှိလိမ့်မယ်...
မင့်တို့ ၃ ယောက်ကပဲ
ရောက်မယ့် ခရီးကို ခေါ်ပါ...
နှလုံးသားနဲ့ နီးနီးလေးပါ သားတို့ရယ်...
at 11:26 PM 12 comments:
If you want my sympathy...
Just open your heart to me...
Oh but baby...
Oh lay back in the arms of someone
Oh baby I'll die for you
Oh yeah lay back in the arms of someone
Oh. . . No